Ihe niile na-egbu maramara bụ ọla ntị ndị a na-egbuke egbuke
N'ihe banyere okwu ịke, ọla ntị agaghị amasị uwe ọ bụla. Ọla ntị nwere ike itinye amara na ọdịdị gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Site na ọla edo rue ọla ọcha, ọla ntị nwere ụdị dị iche iche na-acha ọla edo na-egbuke egbuke, nke ga-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta miri emi. Site na ọdịnala ...
Independent ika okpomọkụ ejiji na na na ọla ntị
Site na mmakpo na tassels ruo ọla ntị na pel, ndị a ọ bụla ọla ntị zuru okè n'ihi na-adị kwa ụbọchị n'oge okpomọkụ eyi. Ọ bụ ezie na anyị bụ nnukwu Fans nke ụdị ọla ọ bụla-ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị ka na-eyi pajamas, ọ bụ ngwa na-eme ka anyị nwee mmetụta "agwụla" ozugbo-mana n'ihi ihe nkpuchi, anyị fi ...
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ 50 kacha mma na mgbaaka nke 2021 | Onye nyocha
site ha na 21-06-07
Ngwaahịa a na-ahọrọ onwe ya site n'aka ndị nchịkọta akụkọ (na-atụgharị uche). Ihe ịzụrụ site na njikọ anyị nwere ike ị nweta anyị ọrụ. A bịaruo ọla ndị metụtara alụmdi na nwunye, mgbaaka njikọ na-abụkarị ihe a na-elekwasị anya, mana ekwesighi ileghara mgbaaka agbamakwụkwọ anya. E kwuwerị, “Nke a bụ naanị pa ...
Mgbanaka “ọhụụ” dị omimi nke Kate Middleton nwere ndị Fans na-akọ nkọ
Ewezuga mgbanaka akara aka ya na mgbanaka agbamakwụkwọ, ọ naghị ahụ ihe ọ bụla ọzọ nke Duchess nke Cambridge na-eyi, mana ọ nwekwara ọmarịcha ọla edo mara mma. Naanị Kate na-ese foto yi ya n'oge ole na ole-ụfọdụ n'ime ha nọ na 2018, obere oge mgbe amụrụ Prince Louis. Ọ bụ...
Ọla ntị kachasị mma maka ihu gị: square, gburugburu, oval, diamond ma ọ bụ obi
Nabata na Glamour Britain. Weebụsaịtị a na-eji kuki iji melite ahụmịhe gị ma nye mgbasa ozi ahaziri iche. Can nwere ike ịpụ n'oge ọ bụla ma ọ bụ mụtakwuo site na ịgụ usoro kuki anyị. Ngwaahịa niile bụ ndị editọ anyị ahọrọla n’onwe ha. Ọ bụrụ na ịzụta ihe, anyị nwere ike irite Mgbakwunye commis ...
Nkwupụta aqua, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ na mmanya na-acha yiri mgbaaka maka oge okpomọkụ
Mpịakọta mmanya ahụ malitere na 1920s (chee "The Great Gatsby"), mgbe ejiji ihe ngosi ejiji na-ewu ewu. N'ezie, a bịa n'ihe mgbanaka mmanya, nke ka njọ na ọnọdụ, nke ka mma, n'ihi na ha na-anọchite anya amara na ịdị ọcha dị ọcha. Kemgbe ahụ, ụdị a na mmụọ ...
Ahụ ọla, Butterfly Ihe eji eme ihe, Olu ọlaọcha, Butterfly Tenis Chain, Tennis Chain Olu, Chain Chains,